बलात्कारी लुकाउन खोज्ने पनि लोकतान्त्रिक सरकार ?
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण र सरकारको दमनकारी नीतिले कञ्चनपुरमात्र तातेको छैन, सामाजिक सञ्जालमार्फत देश र परदेश सबैतिर सरकारको नीतिको आलोचना भइरहेको छ । कम्तिमा पनि सरकारले बलात्कारी र हत्यारालाई पत्ता लगाइन्छ, दण्डसजाय दिइन्छ भन्नुपर्नेमा न्याय माँग्ने जनतामाथि टियर ग्यास, गोली हान्ने र प्रहरी दमन गर्नु हुन्थेन ।
ओली सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार हो । यो जनताको सरकार हो । जनताको सरकारले जनतामाथि गोली हान्ने, राज्यदमन गर्ने गर्दैन । जनताले ओलीको शासन, सत्ता खोस्न खोजेकै थिएनन्, जनताले निर्मला पन्तलाई कसले बलात्कार गर्‍यो, मारेर फाल्यो, त्यो अपराधीलाई पक्राउ गरेर दण्ड देउ भनेका थिए । न्याय माँग्नेलाई दमन, योभन्दा अधिनायकवाद अरु के हुन्छ ?
न्याय माँग्ने जनतालाई सडकमा निस्कन, बिरोध गर्न बाध्य पार्ने ओली सरकार हो । बलात्कारी र हत्यारालाई लुकाउन, बचाउन खोज्ने ओली सरकार हो । आफू गल्ती गर्ने अनि आफूलाई सिंहदरवारको सिंहाशनमा पुर्‍याउने जनताको विश्वासमाथि हमला गर्ने ? जनताको कुरा नसुन्न भनेको ओली सरकारको नालायकी हो । यस्तो नालायकीले लोकतन्त्र चल्न सक्दैन ।
लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, केपी ओलीको बपौति होइन । लोकतन्त्र कुनै पनि नेताको बपौति हुनै सक्दैन । लोकको अधिकार हो, लोकतन्त्र । लोकले अन्याय भयो भनेपछि सरकारले सुन्नैपर्छ, छानबिन गर्नैपर्छ । आखिर गोली ठोकिसकेपछि जनताको कुरा सुन्न त बाध्य भयो यो सरकार । छानबिन समित गठन गर्नैपर्‍यो त । यति काम पहिले नै गरिदिएको भए सरकार सानो हुन्थेन, जनताको नजरमा जनताको सरकारको मान नै बढ्थ्यो ।
बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउन माँग गर्दै महेन्द्रनगरमा जारी आन्दोलनका क्रममा ओली सरकारका प्रहरीले जनतासँग झडप गर्‍यो, जनतामाथि लाठी हान्यो, गोली बर्सायो, आठ नागरिक घाईते भएका छन् ।
लोककल्याणकारी सरकारले जनतामाथि अन्याय भयो भनेपछि तत्काल त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । जनतालाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्नुहुन्न, सरकारले जनताको कुरा सुनेर के हो भनेर निदानका लागि अघि सर्नुपर्छ । जनताप्रति जिम्मेवार छु भनेपछि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार हरदम तमतैयार हुनुपर्छ । प्रहरीलाई दमनमा उतार्नु र नागरिकको कुरा नसुन्नु सरकारको असफलता र नादानी हो ।
कञ्चनपुर अशान्त छ । घाइते आन्दोलनकारी मृत्युसँग लडिरहेका छन् । घाईते तेज भट्ट, कृत पनेरु, मनोज बुढा, सरोज खड्का, सन्तोष कठरियाको स्थिति गम्भीर छ । केही घाइतेका खुट्टामा गोली लागेको छ । न्याय गर, समाजका बिकृति हटाउ भन्दा जनतामाथि यसरी निर्दयी भएर निर्घात कुट्नु, गोली ठोक्नु ओली सरकारले कानुन मिचेको हो, अधिनायक बनेको हो ।
सरकार आफै सक्रिय भएर निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे छानबिन गराउने र संसदमा विशेष प्रस्ताव लगेर देशव्यापी रुपमा बढेको बलात्कार र हिंसाका घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नु गराउनु पथ्र्यो । सरकार यतातिर उदासीन छ । किन ? दुई तिहाईको सरकार विधिराज चाहन्छ भने विधिमार्गमा हिड्नुपर्छ, प्रहरी दमनले सरकारको साख उठ्दैन । भएको साख समाप्तितिर लाग्नेछ । होस् गर ।
भन्नलाई सरकारले भनेको छ– ढुंगामुढा गरेपछि के गर्ने ? प्रहरी परिचालन गर्नैपर्‍यो । प्रहरी पनि घाइते भएका छन् । सरकारले यसरी पन्छिन मिल्दैन, किनपनि मिल्दैन भने सुशासन र समृद्धिको मुख्य एजेण्डा बोकेको सरकारले सुशासन दिनका लागि जनताका कुरालाई पत्याउनुपर्छ, सुन्नुपर्छ । समृद्धिका लागि कसरी रोजगारी बढाउने, निकासीयोग्य उद्यम थाल्ने र व्यापार घाटा घटाउने भन्ने सोच अघि सार्नुपर्छ । दिमागमा घोडाको लिदी भरेकाले जनताको कुरा सुन्दैनन्, प्रहरी दमन गराउँछन् र भन्छन्– ढुंगामूढा भयो । ढुंगामूढा गर्न जनतालाई बाध्य पार्ने सरकार दोषी हो । जनताको न्याय चाहियो भन्ने आवाज समयमै सरकारले सुनेको भए ढुंगामूढा गर्नुपर्ने स्थिति नै आउन्नथ्यो । कस्तो मूर्ख नीति ?